अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिला जर्मनी जाँदै गर्दा आकाशमै जन्माईन बच्चा अब उनी कुन देशका नागरिक बन्छन् ? यस्तो छ कानून समाचार – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिला जर्मनी जाँदै गर्दा आकाशमै जन्माईन बच्चा अब उनी कुन देशका नागरिक बन्छन् ? यस्तो छ कानून समाचार
अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिला जर्मनी जाँदै गर्दा आकाशमै जन्माईन बच्चा अब उनी कुन देशका नागरिक बन्छन् ? यस्तो छ कानून समाचार
admin August 23, 2021 अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 85 Views
६ कक्षाकी विद्यार्थीले हो’स्टलमै बच्चा ज’न्मा’ईन्, हे’ड’सर गि’र फ्ता’र !
मेडिकल साइन्समा अहिलेसम्मकै दु’र्लभ घ’ट’ना, ५ वटा मि’र्गौला भएका व्यक्ति भेटिए !
अफगानिस्तानबाट जर्मनी जाँदै गरेको अमेरिकी विमानमा एक अफगानी महिलाले बच्चा जन्माएकी छिन् । आइतबार, यूएस एयर मोबिलिटी कमाण्डले ट्विटरमा एउटा थ्रेड पोष्ट गर्दै भन्यो कि ती महिला आफ्नो परिवार संग मध्य पूर्वबाट जर्मनी जाँदै थिइन्, तब उनले एउटा बच्चालाई जन्म दिइन् ।
जब महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थाल्यो, विमानको कमाण्डरले विमानमा हावाको चाप बढाउन तल उड्यो । त्यसले आमाको जीवन बचाउन मद्दत गर्‍यो र उनको अवस्था सुधार भयो ।
जब विमान अवतरण भयो, अमेरिकी सेनाका डाक्टरहरुले बच्चा जन्माउन मद्दत गरे । आमा र बच्चा दुवै खतरामुक्त छन् र नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ । यसलाई केही संयोगयुक्त घटना भनिएको छ ।
यस्ता घटनाहरु भएका छन् तर अत्यन्तै कम मात्र । यो खबर आएपछि जर्मनी गन्तव्य भएर उडेका कारण जर्मनी सरकारले उनलाई त्यही जन्मिएको बच्चा मान्ने बताएको छ ।
स्थानीय पञ्चाधिकारीलाई स्थानीय पत्रिकाले सोधेको छ कुनै शिशु आकाशमा जन्मियो भने त्यसको जन्मस्थान कहाँ मान्ने । जर्मनी पञ्चाधिकारले भने हाम्रो कानूनले जर्मनी आउन लागेको उडान हो भने र आकाशमा नै बच्चा जन्मिएको हो भने हाम्रो भूमिमा जन्मिएको मान्छौ । यसैले उनी बच्चा हाम्रा हुन् ।
पछिल्लो ५ सातामा थप ४८ लाखले लगाए कोरोना खोप, दुवै डोज लगाउनेको संख्या १३ प्रतिशत पुग्यो
पछिल्लो पाँच हप्तामा थप ४८ लाखभन्दा बढीले कोरोनोविरुद्धको खोप लगाएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता खोप लगाउनेको उक्त संख्या थपिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत बिहीबारसम्ममा कोरोना खोप लगाउनेको संख्या ८५ लाख २० हजार ४२१ पुगेको छ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएयता खोप लगाउनेको संख्या ४८ लाख ११ हजार ७३३ थपिएको कार्यालयले जनाएको छ। दुवै डोज खोप लगाउनेको संख्या भने ३७ लाख आठ हजार ६८८ पुगेको तथ्यांक छ। अहिले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाउने जनसंख्या १३ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो डोज लगाउने जनसंख्या भने १६.८ प्रतिशत पुगेको छ।
पछिल्लो पाँच हप्तामा कोरोनाको खोप लगाउनेको संख्या झण्डै दोब्बरले बढेको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्ममा ३३ प्रतिशत जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप नि:शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। चैत मसान्तसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै जनतालाई नि:शुल्क खोप दिलाउने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ।
Previous काठमाडौं बासिका लागि महानगरपालिकाले ल्यायो यस्ताे अनौठो नियम, सबैले छिटाे हेर्नुहाेला !
Next काउन्सिलिङ’ हुनु त यस्तो पो !
प्रहरी नै ग्राहक बनेर गएपछि खुल्यो हाइप्रोफाइल धन्दाः मोडेल इशा पक्राउ
एजेन्सी – प्रहरीनै ग्राहक बनेर गएपछि हाइप्रोफाइल वे श्यावृतिको धन्दा बाहिरिएको छ । मुम्बई क्रा-इम …
भोलि अशोज ११ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !